Yuusuf Dabageed “Anaga reer Hiiraan ahaan wax shaqo ah kuma lihin waxa Jowhar laga qeybsaday..” (DHAGEYSO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Yuusuf Dabageed “Anaga reer Hiiraan ahaan wax shaqo ah kuma lihin waxa Jowhar laga qeybsaday..” (DHAGEYSO)
Guddoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar (Yuusuf Dabageed) ayaa si kulul uga soo horjeestay in ergadda ku sugan magaalada Jowhar ay ku heshiiyeen qeybsiga xubnaha golaha baarlamaanka ee labada gole ee Hiiraan iyo Sh/dhexe, wuxuuna sheegay in aysan jirin wax heshiis lagu yahay oo ku aadan dhismaha maamulka labadaasi gobol.
“Anaga reer Hiiraan ahaan wax shaqo ah kuma lihin waxa Jowhar laga qeybsaday, halkaas waxaa ku sugan dad danno gaar ah leh, wax ergo ah oo Hiiraan matalaya oo Jowhar ku sugan ma jiraan, wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya waxay dooneysaa inay ku tumato xaquuqda ay leeyihiin shacabka reer Hiiraan,” Sidaas waxaa yiri Yuusuf Dabageed.
Yuusuf Dabageed ayaa dhinaca kale sheegay inta badan ugaasyadda reer Hiiraan ay haatan ku sugan yihiin magaalada B/weyne ee xarunta gobolka Hiiraan, islamarkaana ay magaalada Jowhar ku sugan yihiin oo kaliya labo Ugaas oo markoodii hore Muqdisho caafimaad ahaan u tagay.
“Gobolka reer Hiiraan anigaa gudoomiye ka ah, waxa haatan laga shaqeynayo waa siyaasad, dhaqankana waxba lagama weydiin, inta badan Ugaasyada reer Hiiraan waxay joogaan magaalada B/weyne, 7 ugaas ayaa halkan joogta, Jowharna 2 ugaas ayaa ku sugan, waxaasna anaga raali kama nihin, hadii sidaan ku socotana reer Hiiraan waa tashanayaan” Sidaas waxaa yiri Yuusuf Dabageed.
Ugu danbeyntii, hadalka gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Dabageed ayaa kusoo beegmaya xilli maalintii shalay xog-hayaha joogta ah ee wasaarrada arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya uu ku dhawaajiyay in ergada ku sugan magaalada Jowhar ay isku afgarteen sida loo qeybsanayo xildhibaanadda baarlamaanka maamulka la sheegay in loo dhisayo labada gobol ee Hiiraan iyo Sh/dhexe.